China Curved Glass Kitchen Suction Copper Motor Chimney Cooker Hood ndị na-emepụta na ndị na-ebubata |Vangood
Curved Glass Kitchen Suction Copper moto Chimney Cooker Hood
Ọnụ ahịa kacha nta:100 setịpụ
Ọnụ ego FOB:Ọnụ ahịa USD, biko hụ ndepụta ọnụahịa maka oke ọnụ ahịa: USD32-45
ọdụ ụgbọ mmiri:Zhongshan, Guangzhou, Shenzhen
ụzọ nkwụnye ụgwọ:T/T, L/C, WESTERN UNION.
Ikike mbunye:20000 na-esetịpụ otu ọnwa
Oge nnyefe:Site T / T, n'ime 30 ụbọchị mgbe natara 30% nkwụnye ego
ọkọlọtọ ọkọlọtọ:Mbupu ọkọlọtọ oke osimiri kwesịrị ngwungwu katọn 5-layer gụnyere ụfụfụ nchebe, ma ọ bụ ngwugwu dị ka onye ahịa chọrọ.
- Igwe anaghị agba nchara na igwe anaghị agba nchara
- 60 cm n'obosara
- Nyo na aluminom ntupu
- 2 1.5W ọkụ ọkụ
- moto 160W
- Mwepụta ihe: 750 m3 / h
- Metal blower ụlọ
- Ọkwa ụda: 58 db (A)
- Ebe ọkụ - ọwa mmiri na-agbanwe agbanwe gụnyere
- Ọsọ mgbanwe (Ogwe aka).
- Ngosipụta dijitalụ
- dayameta chimney: 150 mm
- arọ: 13kg
- Akụkụ: 60 obosara x 50 omimi x 50 cm elu
- 1 afọ akwụkwọ ikike
Ihe mkpuchi dị mfe iji bụ ụtụ maka ndụ.
Were ume miri emi na-agbanarị anwụrụ ọkụ, ma nwee ọrịre na isi nri.
Ọ dị mfe ihicha panel ahụ, kee mmanu mmanu.
Igwe ọkụ dị nro nke LED na-enwu ọkụ kichin na-enweghị imetụ ọchịchịrị ahụ aka, na-azọpụta ike ma ghara imerụ anya.
Oghere dị n'ime enweghị nkwụsịtụ na ịsacha, na enwere ike iji otu bọtịnụ dozie nchegbu niile.
Ihe mkpuchi ahụ enweghị ike ịsacha onwe ya, ọ na-akpasukwa iwe n'otu n'otu.Nchịkọta condensate n'ime otu ọnwa na-emepụta isi ísì.Unyi zoro ezo maka ọnwa 3 ma na-amụba nje bacteria.Mmanụ chịkọbara na impeller maka ọnwa 6, na mmiri adịghị ike.
Ịchịkọta mmanụ, nsị na-adịghị ike, dị mfe ịgbapụ na anwụrụ ọkụ.Nhicha n'onwe gị abụghị ọkachamara ma sie ike ịkwatu.Ọ bụrụ na ihichaghị nke ọma, nje bacteria ga-amụba, ísì dị iche iche ga-adịkwa mma.Ịrịọ ndị ọkachamara ka ha kpochaa dị oke ọnụ.
Otu igodo akpaka ịsacha, ọ dịghị mkpa ịgbakwunye mmiri ma ọ bụ ịkwasa igwe, mkpuchi ahụ nwere ike ịmịnye ogologo oge.125ºC na-akụda ntụpọ mmanụ isi ike, okpomọkụ dị elu na-agbaze ngwa ngwa mmanụ dị na impeller fọdụrụnụ, na-akpọnwụ ngwa ngwa.
Dị iche na moto nkịtị, anyị na-eji moto ọla kọpa a nụchara anụcha.Kwụsị ma na-adịgide adịgide, mkpọtụ dị ala, moto waya ọla kọpa nwere oke ọsọ zuru oke, ikuku siri ike na mmiri siri ike, ma siri ike ma dị nro, na-ewepụ anwụrụ ọkụ ngwa ngwa karịa ka ị nwere ike iche.
60 sekọnd igbu oge nkwụsị.
Mgbe ị na-esi nri, ọ dịghị mkpa ichere, mkpuchi ahụ ga-anọgide na-arụ ọrụ maka 60 sekọnd, a ga-ekuba anwụrụ ọkụ fọdụrụnụ.
Ịdị mma nke Europe.
Ogwe iko kristal na-ekpo ọkụ nke ojii, dị larịị dị ka enyo, nke mara mma na nke mara mma, na-achọ kichin mma.
Bọtịnụ njikwa igwe nwere mmetụta, njikwa n'efu nke ọsọ ikuku atọ, ọrụ dị mfe.
Integral ịkpụzi oghere anwụrụ ọkụ, njikwa anwụrụ ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma, ntụpọ mmanụ nwere ike ịdị mfekpochapụrụ, dị ọcha ka ịchọrọ.
Nke gara aga: Ụdị Carbon Filter Slim Extractor Telescopic Cooker Hood
Osote: 60cm ihe na-esi nri ihe ọkụkụ na-ekpochapụ onye na-akwado kichin Range Hood Chimney
Kitchen Hob na Hood
Ihe mkpuchi kichin
Eriri Carbon Filter Slim Extractor Tel ...
Ihe mkpuchi mkpuchi ihe mkpuchi mkpuchi ihe mkpuchi mkpuchi 60cm ...
60cm ihe na-esi nri ebe a na-ekpochapụ onye na-akwado kichin oke...